35 Responses to “မြောက်ကိုလားသော်..”
စိတ်ဝင်စားစရာပို့စ်အသစ်တွေကိုထပ်ထပ်ပြီး မျှော်နေရပါတယ် မချောရေ..
ကံစီး စော်ဘွားကြီး အကြောင်းကိုလည်း စိတ်ဝင်စားတယ်၊ ဥရုချောင်းကိုလည်း သနားတယ်........ ပိုစ့်အသစ်ကို မျှော်ရင်း ဖတ်သွားပါတယ် မချော ခင်ဗျာ။ :P
ဥရုချောင်းဖျားကို မြင်ခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးပါ ..
ကံစီးစော်ဘွားကြီးရဲ့ ရွှေမောင်းတွေကိုလည်းတွေ့ဖူးချင်ပါတယ်.. (ဘိုထိန်)
ရတနာတွေ ရှိနေခြင်းက ပတ်ဝန်းကျင် သယံဇာတတွေကို ထိခိုက်စေနိင်တယ် ဆိုပြီးတော့လေ။
ကံဆီးရွာက ပျော်စရာလေးနော်။ ရေကလဲ ကြည်လင်နေတာဘဲ။ ပြီးတော့ အရမ်းလဲ ရေမနက်ဘူး။
Wahh I want to go there n play in that stream.(use phone n comment) sorry My dear sis:)))))
ရေထဲက ခြေထောက်က မချောခြေထောက်လား.. :P.. အဟီး.. နောက်တာ.... မချောရဲ့ ဇာတိမြေအလှလေးကို ခံစားသွားတယ်ဗျာ... နာမည်ကြီးပဲနော့... လောပန်းလောင်းတွေ သွားလေ့ရှိတာပေါ့..း))
မြောက်ပိုင်းဒေသရဲ့ အလှအပတွေကို မြင်ခွင့်ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမရေ။ ဥရုချောင်းရေက ပြန်ကြည်ဖို့ မလွယ်တော့ဘူးထင်ပါ့။ အဲ့ဒီအတွက် ရင်မောမိပါတယ်။
သို့သော်လည်း ချောင်းဖျားကတော့ အရင်အတိုင်းရှိနေသေးတာကို ကျေးဇူးတင်ရမယ်။ ဆက်တင်မယ့် ပို့စ်တွေကို မျှော်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကြည်လင်တဲ့ ချောင်းရေထဲမျာ ဆော့ကစားရတာ ပျော်စရာအလွန်ကောင်းမှာ...။ ၀ါးတံတားလေးကလဲ အသည်းယားစရာ...။ သဘာဝရဲ့အလှတရားတွေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ယိုယွင်းလာတာ စိတ်မကောင်းစရာပါချောရေ...။ ကံဆီးစော်ဘွားကြီးအကြောင်း စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဒီပြင်ဟာ ကြားမဖြတ်ပဲ ပို့စ် ဆက်တင်ပေးပါဗျို့...။
အိမ်ထောင်မှုကိစ္စတွေနဲ့ ချာလပတ်ရမ်းသွားလို့ အလည်မလာဖြစ်တာ ခွင့်လွှတ်ဗျာ...စာကြွေးတွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်းမှပဲ လာလာဖတ်တော့မယ်...
ဘုန်းကြီးကျောင်းက ကျွေးတဲ့ ထမင်းနဲ့ဟင်းကို သွားရည်ကျလိုက်တာလေ...တကယ့်ကို စေတနာကောင်းတဲ့ ဒေသပါပဲ...တစ်နေ့နေ့တော့ အဲဒီဒေသဘက်ကို အလည်ရောက်ဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့...
စာလာဖတ်တဲ့သူတွေ တော်တော်များများက ကြည်လင်နေတဲ့ ဥရုချောင်းကိုပဲ မြင်သွားကြသလိုပဲ။ ကြည်နူးစရာကိုပဲ ကွက်မြင်ပြီး စိတ်မချမ်းသာစရာ တွေကို မမြင်ချင်ယောင်ဆောင် တတ်ကြတာ လူ့သဘာဝပဲထင်တယ်နော်။ မချောပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျကို အပြည့်အ၀ခံစားမိတဲ့ ဒို့ကတော့ တကယ်ကို ဥရုချောင်းအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်လဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားငယ်မိတယ်။ မချောရဲ့ ဒီပို့စ်လေးကို ဖေ့ဘွတ်မှာ ရှယ်ခွင့်ရရင် ရှယ်ချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်လိုမျိုး တခြားသူတွေ ဖတ်ရလို့ တယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဥရုချောင်းရဲ့ အဖြစ်ကိုသိရရင်လဲ အကျိုးရှိတယ်လို့ ခံစားမိလို့ပါ။ ကျေးဇူး။
ချောင်းလေးကိုကြည့်ပြီး တာလေက နန့်မွေချောင်းကိုသတိရသွားတယ်....။
Anonymous >> ရှယ်လို့ရပါတယ်ရှင်..
ဥရုချောင်းအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ပေးတာ ကျေးဇူးပါနော်..
ဆိုင်ကယ်ကူးလို့ ရတဲ့ ဝါးတံတားလေးကို သဘောကျတယ်..ချောင်းရေက ကြည်လင်လိုက်တာ မချောရေ..အဲဒီချောင်းလေးမှာ ရေချိုး၊ ရေစိမ်၊ ရေဆော့ချင်လိုက်တာ..ကံစီစော်ဘွားအကြောင်း ဖတ်ချင်တယ်..
အားကျတယ် .. အားကျတယ်
ဥရုချောင်းအကြောင်းကို ဖတ်ရတိုင်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ် မချော... ဟင်းတွေကို ကြည့်ရတာနဲ့ တင် မချောတို့ ဘယ်နှပန်းကန်မှန်း မသိလောက်အောင် ဆိုတဲ့ စကားကို ယုံကြည်မိပါတယ်...
ပုံကြည့်ပြီး သရက်ချဉ်သုပ် စားချင်လိုက်တာ ..း)
ကြိုးတံတား ဝါးတံတား ဘေလီတံတားတွေနဲ့ လောဘသမားတွေ ကြောင့် ဒီချောင်းလည်း နှောက်ကာပျက်ရပြီပေါ့၊
၀ါးတံတားပေါ် ဆိုင်ကယ်စီးတာ လန့် စရာကောင်းလိုက်တာ မမမချောရယ်..
နောက်မှ ခရီးတစ်ခုခုသွားဖို့စီစဉ်ရဦးမယ်
(နေပြည်တော်ကိုသွားပြီး ထီးနန်းပေါ် စံမြန်းနေလိုက်ရင်ကောင်းမလားလို့ ...)
ကံဆီးစော်ဘွားအကြောင်း ဖတ်ချင်တယ်ချောရေ ...
ဥရုချောင်းထဲမှာ ရေကစားပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ထမင်းအ၀ စားချင်လိုက်တာ :))
အစ်မရေ အဲ.နေရာလေးတွေ မောင်မောင်ငယ်ငယ်ကရောက်ဖူးတယ်။ အရမ်းကိုပျှော်ဖို.ကောင်းတယ်။ လူလည်းအရမ်းစည်တယ်နော်။ အလွမ်းပြေစေတဲ.အတွက် ကျေးကျေးပါဗျို.။
ကြည်လင်နေတဲ့ ချောင်ရေရယ် အေးချမ်းလှပတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အလှရယ်.. စိတ်ချမ်းမြေ့ ကြည်နူးစရာပါလား မမရေ...ရောက်ဖူးချင်လိုက်တာ...
ပုံကြည့်ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကျွေးတဲ့ ဟင်းတွေ စားချင်လိုက်တာ
sitagu hsipaw said...
face book မှာ အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်နာမည်နဲ့ ဓါတ်ပုံတွေတွေ့တွေ့နေတာ၊ ဓါတ်ပုံတွေကြိုက်တယ်.. ဒီနေ့မှ ထမနဲပုံနဲ့အတူ comment ကိုတွေ့လို့.. ကိုဝင်းသောင်း share ထားတဲ့ပုံပါ။ ၀င်ကြည့်ဖြစ်သွားတယ်။ အများကြီးလုပ်ထားတာနော်.. အားကျပါတယ်။ တ၀ကြီးဝင်ဖတ်သွားပါတယ်.... ကံဆီး စော်ဘွားကြီးအကြောင်း စောင့်ဖတ်ပါမယ်။
ဟုတ်တယ်နော် ဥရုချောင်းရေက လုံးဝကို ကွာခြားသွားတာ...လူတွေရဲ့ လောဘအရောင်တွေပေါ့ မချောရယ်.. နောက်ပို့စ်ကို လဲ မျှော်နေမယ်
Dear Ma Chaw, thanks for the interesting post.
U RU HKA U RU Myit we can't protect you sorry ! when we are young we drink from this river but now every things change :( Lone Khine village also how long can u stand there :(
အခု ဗမာ စစ်တပ်ရောက်သွားပြီ ဆိုတော့ သိပ်မကြာခင် အဲဒီ ဒေသ မြစ်ရေတွေလဲ နှောက်သွားတော့မှာပါ။